उदारवादी अर्थक्रान्तिको नारा लिने, अनि लाखौँलाई रोजगार दिने कारखाना उडाइयो –परशुराम खापुङ - Naya Online
उदारवादी अर्थक्रान्तिको नारा लिने, अनि लाखौँलाई रोजगार दिने कारखाना उडाइयो –परशुराम खापुङ
शनिबार, साउन १६, २०७८ (July 31st, 2021 at 6:58pm ) मुख्य समाचार, राजनीति
ललितपुर, १६ साउन । नेपालमा उदारवादी अर्थक्रान्तिको नारा दिँदै अगाडि बढेका दलहरूले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हैटौडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना बालाजु कपडा उद्योगजस्ता कैयौं कारखानाहरू बन्द गरिएको जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य परशुराम खापुङले बताए ।
लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा नवौं भर्चुअल श्रृङ्खलामा प्रमुख वक्ताका रूपमा आएर खापुङले सो कुरा बताएका हुन् ।
खापुङले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको स्थापना र यसका मुद्दाहरू विषयमाथि भर्चुअल उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू राखेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नेपाली काँग्रेस या कम्युनिष्ट घटकहरूभन्दा फरक बिचार र सिद्धान्त लिएर जन्मिएको खापुङको भनाई थियो । जसपाले पहिचानको पक्षमा बोल्ने, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको रक्षा गर्ने, समानुपतिक प्रतिनिधित्वको वकालत गरिरहेको उनको जोड थियो ।
पछिल्लो चरणमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको प्रति लक्षित गर्दै खापुङले भने –“अहिले संघीय सांसदमा मात्र होइन, स्थानीय निकायमा समेत चुनाव लड्दा करोडौँ खर्च गरिरहेका छन् ? यो रकम कहाँदेखि आउँछ ? पक्कै भ्रष्टाचार हो ।”
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै खापुङ जसपा सरकारमा सहभागी हुँदै गरेको जानकारी पनि दिए ।
जसपा नेपाल, लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिले हरेक शनिबार गर्दै आएको यो नवौं श्रृङ्खला हो । कार्यक्रम पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमको अध्यक्षता र सचिव केदार धिमालको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो ।